AFIFAB/Rindra gasy fiderana. – FJKM
FAMARANANA NY HERINANDRON’NY FIFANDRAISANA
« RINDRA GASY FIDERANA »
Masoandro mody no nampalahelo, hoy ny fitenenana izay, fa dia nafana sy nahafa-po ny mpanatrika ary mendrika ny voninahitr’Andriamanitra ny hetsika nampitondraina ny lohateny hoe : « RINDRA GASY FIDERANA » teny amin’ny Akany FJKM Andravoahangy Fivavahana ny Alahady 25 martsa tolakandro lasa teo.
Ny ASAFIA Ambodihady sy ny TROMPETRA VOLAMENA Manarintsoa Finoana no nandray anjara tamin’izany izay nanehoan’izy ireo fa ny zava-kanton’ny Gasikara dia azo hitoriana ny filazantsara.
Nisy ireo vahiny manokana nasaina (Invité surprise) dia tsy iza fa ny Tarika MENAFIFY avy ao amin’ny FJKM Ambalavao Isotry sy ny tanora tao amin’ny FJKM Amboasarikely Fiadanana.
Ity hetsika ity dia natao ho fanitarana ny Radio Fahazavana manerana ny nosy satria efa nivoaka ny fahazoan-dalana amin’ny faritra fito : Ambatondrazaka, Sambava, Toamasina, Fianarantsoa, Miarinarivo, Moramanga ary Ambatolampy. Inoana fa tsy ho ela ihany koa dia hivoaka ny fahazoan-dalana ny Televiziona Fahazavana. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Birao Mpiandraikitra Foibe FJKM sy ny Filohan’ny AFIFAB niaraka tamin’ireo komity AFIFAB, ny talen’ny AFIFAB sy ny fianakaviamben’ny AFIFAB rehetra, na ny tao amin’ny Radio Fahazavana, ny Gazety Marturia vavolombelona, ny Site web, ny Santatra Fahazavana.
Ny hetsika no nifarana fa ny ezaka mbola mitohy. Koa ianao izay vonona handray anjara biriky amin’izany dia mandray anao am-pitiavana ny tomponandraikitra ho fanitarana ny ambaindain’ny fanjakan’Andriamanitra ety amin’ny Foibe FJKM Trano Ifanomezantsoa Analakely rihana faha 6.